Archive du 20190304
Mpitondra teo aloha Hohenjehina koa i Paul Rabary…
Re ihany koa ankehitriny fa ao anaty lisitry ny hosamborina i Paul Rabary, minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha.
Nisokatra ny fambolen-kazo nasionaly Horakofantsika ala i Madagasikara, hoy Rajoelina
Ho rakotra ala i Madagasikara. Io no teny filamatry ny taom-pambolen-kazo 2019-2020 nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tany Analameva-Antsirinala Moramanga ao amin’ny tanin’ny Fanalamanga ny sabotsy 2 martsa teo.
Antenimieram-pirenena Misy politika vaovao tokony hapetraka, hoy ny mpahay lalàna
Ohatra ny manahirana be ny mijery ny antenimieram-pirenena teo aloha, hany ka toa kivikivy ny olona, hoy ny mpahay lalàna, Lisy Ralitera,
Fifidianana solombavambahoaka Mbola mangingina hatreto
Ny kandida ho depiote tarihin’ny mpahay lalàna Lisy Ralitera sy Dany Rakotoson no tonga nanatitra dosie filatsahan-kofidiana voalohany tetsy amin’ny OVEC Nanisana izay misahana ny distrikan’Avaradrano.
Raharahan’i Venezuela Manohana ny hevitry ny tandrefana i Madagasikara
Namoaka fanambarana mahakasika ny raharaha any Venezuela amin’izao tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina.
ANTOKO STEP MADAGASIKARA Hamerina amin’ny fomba madio ny fanaovana politika eto amintsika
Antoko politika vaovao vao niforona ny Step Madagasikara, tarihin’ny filohany Rtoakely Raberanto.
Ataovy ihany ary !
Miarahaba anao aho ry Jean ! Manao ahoana ianao izay ? Naheno aho mantsy hoe somary nandalo tsy fahasalamana izay ianao knoo !
Fanadiovana sy fisamborana Sao dia tsy antonona intsony Antanimora sy Tsiafahy ?
Tsy antonona intsony Antanimora sy Tsiafahy, raha izay mpiasam-panjakana nanao afera no ampidirina am-ponja vonjimaika avokoa. Maneho endrika firosoana amin’ny fanadiovana ny fitantanan-draharaham-panjakana ny mpitondra ankehitriny.
Jean Nirina HAFARI Nosamborin’ny zandary
Nosamborin'ny zandarin’Itaosy ny sabotsy lasa teo i Jean Nirina Rafanomezantsoa Filohan’ny Hafari Malagasy, raha ny vaovao niparitaka omaly. Tsy fantatra mazava na efa votsotra izy na ahoana.
Tale jeneralin’ny ACM teo aloha Namoahan’ny fanjakana IST
Namoahan’ny fanjakana didy tsy fahafahana mivoaka ny sisin-tanin’i Madagasikara na « IST » ny Tale jeneralin’ny ACM (Aviation Civile de Madagascar) teo aloha Atoa James Andrianalisoa, raha ny vaovao mivoaka amin’izao fotoana.
Rivodoza HALEH Tsy hisy fiantraikany eto amintsika
Nisy rivodoza miforona eo amin`ny fari-dranomasina oseana indianina ny zoma alina lasa teo. Efa tafiditra aty amin’ny fari-dranomasina Indianina ary mihamitombo hery io rivodoza io saingy
Taninketsan’ny Barea Hotilian’ny manampahaizana eny amin’ny fokontany
Vita ny sabotsy teo tetsy amin’ny Dome Ankorondrano ny antsapaka nisarihana ireo ekipa miisa 80 eo tsara vintana teto amin’ireo boriborintany miisa 6 enina eto Antananarivo handray
Nicolas Dupuis Azo atao ny manafatra ny FC Fleury 91 hihaona amin’ny Barea
Fantatra tamin’ny sabotsy 2 martsa teo teny amin’ny “Maison du Foot-ball Malgasy” eny Isoraka fa hotanterahina rahampitso talata 05
Rugby – Fileovana FTMM Morarano Voafidy ho filoha indray i Fafah
Tao anatin’ny fifampiarahabana nahatratra ny taona sy fivoriana natao teny Ivandry omaly alahady 3 martsa 2019 ka nanaovana fifidianana birao hitantana indray ny fileovana rugby FTMM (Fikambanan’ny Tanora Morarano Milalao)
Foiben’ny CAF any Egypte Nihaona Atoa Ahamad sy ny minisitra Tinoka Roberto
Tamin’ny zoma 1 martsa 2019 teo no noraisin’Atoa Ahmad tao amin’ny foiben’ny CAF any Egypte niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky toa an-dry Mouad HAJJI, Nathalie Rabe, Ludovic Lomotsy, Rakotomalala Stanislas sns…
Fanagadrana no lehibe indrindra !
Adinodino ny fahasahiranan’ny tany avaratry ny Nosy noho ny valan’aretina kitrotro nandripaka.
PoliteknikaVontovorona MD ny filohan’ny mpianatra, anio ny fitsarana
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora nanomboka ny sabotsy lasa teo Randriamampiavana Donald filohan’ny Fikambanan’ny Mpianatra Politeknika Antananarivo (FMPA).
Sehatra harena ankibon’ny tany Tsy misy fiantraikany ara-toekarena Malagasy hatreto
Lazaina mandrakariva fa firenena manankarena amin’ny harena ankibon’ny tany i Madagasikara.
Polisim-pirenena Nosoloina ny Commissaire Central sy ny lehiben’ny PAF
Manamboninahitra ambony miisa roa avy ao amin’ny polisim-pirenena nitana andraikitra goavana no noesorina tamin’ny toerany ny faran’ny herinandro teo.
Mpamily fiara vaventy sy AUTO ECOLE Mangataka ny hamerenana ny “permis” mavokely
Efa volana maromaro izao no tsy nisy intsony ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiarakodia biometrika eo anivon’ny “Centre d’immatriculeur” eny Ambohidahy.
Oniversite tsy miankina Manodidina ny 217 ny isany amin’izao manerana ny Nosy
Tsy mitsaha-mitombo ny isan’ireo oniversite tsy miankina amin’ny fanjakana eto amintsika.
TAOTRANO Ritra ny kininina, niaka-bidy ny hazo
“Niakatra 25 ka hatramin’ny 50% ny vidin-kazo tato anatin’ny tapa-bolana”.
Holafitry ny mpampivelona «Tsy mpamono olona sy liam-bola izany izahay”
Nivoaka tamin’ny fahanginanany ireo mpampivelona manoloana ny fitoriana ny rahavaviny tao Moramanga.
Fanondranana andramena an-tsokosoko Manjavozavo hatrany ny fanadihadiana
Manoloana ny fampidirana am-ponja vonjimaika tany Ambalatavoahangy Toamasina an’ireo sinoa miisa 15 voarohirohy tamin’ny fitaterana andramena an-tsokosoko tamin’ny 5 febroary lasa teo dia tsy hita mazava ny tohin’ny raharaha amin’izao fotoana.
JIRAMA Fa inona no tena olana ?
Efa tena tsy laitran’ny balan’ny fitarainana intsony ny afitsoky ny orinasam-panjakana JIRAMA sy ny tsy fahaizany amin’ny fitantanana ny famokarana sy fitsinjarana ny jiro sy ny rano.